एमसिसीबारे अहिलेको कथित हिरो कुलमान घिसिङ बोल्नुपर्दैन् ? - UrjaKhabar एमसिसीबारे अहिलेको कथित हिरो कुलमान घिसिङ बोल्नुपर्दैन् ? - UrjaKhabar
बाढीले बगाएर तौलिहवा वितरण केन्द्रका दुई कर्मचारीको निधन
सिंहदरबार, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा मंगलबार बिहान साढे २...
जलविद्युत समूह २.९१ अंकले घट्दा ३९ करोड...
चैनपुर-तुम्लिङटार-खाँदबारी लाइन मर्मत गर्न ४ दिन विद्युत...
सुपर आँखुखोलाकाे निर्माण फागुनदेखि, २०८० भित्र विद्युत...
प्रसारण लाइन समस्याले ६ महिनामा अरुण भ्यालीको...
खिम्तीको अन्तरिम पिपिए दर २ रुपैयाँ
एमसिसीबारे अहिलेको कथित हिरो कुलमान घिसिङ बोल्नुपर्दैन् ?
काठमाडाैं । नेकपाको उच्च नेतृत्वले परिमार्जन र संशोधनपछि अमेरिकी सहयोग एमसिसी (MCC) संसदबाट पारित गर्नै समझदारी गरेको छ। अब आमजनमानसमा उठेका विविध तर्क, चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्ने र त्यसअनुकूल एमसिसी पास गर्ने कार्यभार नेकपामा आइपुगेको छ।
एमसिसी अमेरिकासँग गरेको दुई पक्षीय सम्झौता भएको कारण आज जनमानसमा उठेका तमाम सवाल, प्रश्न र चासोलाई नेकपाले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो काम अमेरिकाले आएर गरिदिँदैन । नेपाल पनि त्यसको पक्ष भएकोले सन् २०११ देखि २०१७ सम्म सरकारका विभिन्न निकायले एमसिसी कसरी र केका आधारमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे ? त्यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन् ?
७ वर्षसम्म नोगेसियसन गरेका हाम्रा सरकारी निकाय किन बोल्दैनन् ? केका आधारमा टेकेर हस्ताक्षर गरेको ? तिनले बुझेर कि नबुझी ? नेपालको कानुनलाई अमेरिकी कानुनले supersede गर्छ भने कानुन मन्त्रालयले किन विरोध गरेन ? किन सम्झौता गर्न हुन्न भनेन ?
संसदबाट पारित गर्ने कुरा पहिलो सम्झौतामा थिएन। कानुन मन्त्रालयले पछि राय दिएर थपिएको हो । त्याे पनि ओलीको सरकार बनेपछि। यसो किन गरियो ? वाैद्धिक सम्पत्ति (Intellectual property rights-IPR) को बारेमा किन कानुन मन्त्रालय मौन ? भोलि ट्रान्समिसनको टावर बन्दै गर्दा सुनखानी, यूरेनियम फेला पर्ला । त्यो कसको हुने ? आइपिआर (IPR) अनुसार अमेरिकाको हक लाग्ने कि नेपालको ?
कानुन मन्त्रालय खोई बोलेको ? ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र विस्तारबारे अहिलेको कथित हिरो कुलमान घिसिङजी बोल्नु पर्दैन् ? एमसिसीको सबै विवादास्पद आयोजना नै ट्रान्समिसन लाइन तर बिजुली अफिसका अहिलेका हाकिम किन मौन ? उहाँले कुन फाइदा र सर्त देखेर अगाडि बढ्नु (go ahead) भन्नु भो ?
डलर भत्ता लिएर अमेरिका घुमेर भत्ता पचाएर फोटो खिचेर मात्र त हुन्न होला ! खै जवाफदेहिता खै accountability ? जनमानसमा यत्रो प्रश्न उठेपछि हिजो सात वर्षसम्म नेगोसिएसन गरेका, text exchange गरेका सरकारी अधिकारी र निकाय बोल्नु पर्दैन् ? अमेरिका, चीन, भारत र अरूले जे जे ल्याए त्यही सही धस्काउने कि राष्ट्रिय स्वार्थ पनि हेर्ने ?
भोलि निर्माणको क्रममा सुरक्षा चुनौती आउला रे ! सुरक्षा दिने हामीले कि अमेरिकी सेनाले ? के छ सहमति ? राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा कम्प्रोमाइज हुनुहुँदैन । यसमा उठेका सवाललाई नेपाली सेनाले जवाफ दिनुपर्दैन् ? Whether MCC is part of Indo-Pacific Strategty भन्ने प्रश्न उठेको छ । Indo-Pacific Strategy मा नेपाली सेनाको role and rule of engagement के हो ? के हो सहमति ?
आम जनमानसमा कुरा उठेपछि हाम्रा राज्यका निकायले जवाफ दिनुपर्दैन् ? प्रसंग अमेरिकाको होइन् । प्रश्न हाम्रो हो । जिम्मेवार र उत्तरदायी हाम्रा मान्छे हुने हो । राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको के हाे ? MCC pact overnight सही भएको त हाेइन । ६-७ बर्षसम्म intensive negotiations र text हरू exchange भएकै हुन् । के हेरे हाम्रा मान्छेले ?
नागरिकस्तरमा व्यापक बहस र चासो भएपछि त्यसको सम्बोधन गर्ने र जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकार र सरकारका तत्तत् निकायको हो । हाम्रो चासो, सरोकार र बहसलाई हामीले हो सम्बोधन गर्ने । अमेरिकाले आएर गरिदिँदैन । उसलाई खाँचोपनि छैन् ।
Nothing comes asafree lunch भनिदिन्छन् । त्यसैले नागरिकको तहमा उठेका सबै vital concerns हरूबारे के सहमति सम्झौता भएको हो ? यदि, कुनै अलिखित छन् भने पनि सरकारी निकायले प्रष्ट पार्नुपर्छ । यो मुद्दामाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, कानुन, अर्थ, रक्षा, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बोल्नुपर्छ ।
नेपाली सेना, कुलमान घिसिङकाे बिजुली अफिस (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण), सडक विभाग उत्तरदायी हुनु पर्ने कि नपर्ने ? फेरि, केहीले बुझे जस्तो र अतिरञ्जना गरे जस्तो पनि होइन, एमसिसी । घोर अमेरिका विरोधी कित्तामा रहेका चीन र रूसको बीचमा रहेको मंगोलियाले एमसिसी पहिलो चरणको काम सकेर दोस्रो चरणका लागि अमेरिकासँग कुरा गर्दैछ ।
प्रशस्तै दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू जो अमेरिका विरोधी कित्तामा रहेका छन्, उनीहरूले पनि यो सहयोग लिएर अघि बढेकै छन् । कोही पनि अमेरिकी दास र नोकर बनेका छैनन् । कुनै मुलुकमा अमेरिकी सेना आएको पढ्न पाइएको छैन्, दूर्भाग्यवश । र, अर्को कुरा पनि के बुझौं भने अमेरिका र चीन अहिले आकाशमा, भू-उपग्रहमार्फत लड्छन् । एकअर्कालाई माथिबाटै निगरानी राख्छन् ।
युद्द र टकरावको मोड अर्कै भइसक्यो । हामी अझै बिजुलीको टावरमा surveillance मेशिन राख्न लागेको छ, अमेरिकाले भनेर १८औं शताब्दीतिरका युद्दका शैलीको बखान गर्दैछौं, कठै चिन्तन ! चीनलाई घेर्न पाल्पाको डाँडोमा अमेरिकाले मिशाइल राख्दैछ रे ! यस्ता हावादारी कुरा सुन्दा अलिकति मोर्डन वारफेयर बुझेको मान्छे कति हाँस्दो हो ।
आज अमेरिकी सहयोगबारे प्रश्न गर्दै गर्दा भोलि चीनको BRI माथि पनि प्रश्न उठ्छ, जरुर । उठाइने छ । अनि हामी कसैले बिश्वास गर्न नसक्ने वाैद्धिक रूपमा टाट पल्टिएको देशको रूपमा परिणत हुनेछौं । लंकामा यस्तै लफडा आयो, एमसिसीबारे । सरकारले पार्टीका नेता हैन विज्ञको टिम बनायो ।
तसर्थ, अमेरिकासँग सोध्नु अगाडि यो विषयमा हाम्रै मान्छेलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाऊँ ।सहमतिको दस्तावेज दुवै भाषामा उपलब्ध छ । र, सबैले पढ्न पाउँछन्/ सक्छन् । तर, आम नागरिकको तहमा उठेका चर्चा परिचचर्चा, संशय र शंका हटाउने काम सरकार र यसका सरोकार निकायहरूको हो . त्यसपछि बल्ल अमेरिकाको हो ।
जलविद्युत समूह २.९१ अंकले घट्दा ३९ करोड बढीको कारोबार
चैनपुर-तुम्लिङटार-खाँदबारी लाइन मर्मत गर्न ४ दिन विद्युत आपूर्ति बन्द हुने
सुपर आँखुखोलाकाे निर्माण फागुनदेखि, २०८० भित्र विद्युत उत्पादन
प्रसारण लाइन समस्याले ६ महिनामा अरुण भ्यालीको डेढ करोड आम्दानी...